Kenya oo markii ugu horreysay shaacisay tirada ciidan badan oo kaga dhintay weerar Al-shabaab ku qaadday millatarigooda | Araweelo News Network
Kenya oo markii ugu horreysay shaacisay tirada ciidan badan oo kaga dhintay weerar Al-shabaab ku qaadday millatarigooda
Mrs. Rachael Omamo Kenyan Defense Minister
Nairobi (ANN)- Dawladda Kenya ayaa markii ugu horreysay shaacisay qiyaas ku saabsan tirada askarta kaga dhintay weerar dagaalyahannada Al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidankoodu ku lahaayeen degaanka Ceel-cadde oo ka tirsan Gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya maalintii Jimcaha ee toddobaadkan.
Wasiirka Gaashaandhigga Kenya Mrs. Rachael Omamo oo warbaahinta kula hadashay magaalada Nairobi shalay, ayaa sheegtay in qiyaastii 80 askari oo ka tirsan ciidammadoodu ku waxyeelloobeen weerarkii Al-shabaab ku qaadday saldhigga Ceel-cadde.
Inta badan ciidankan ayaa la sheegay in aan illaa hadda la ogeyn geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin, waxana socda baadhitaanno xooggan oo ciidammada cirka ee Kenya ku baadi-goobayaan askar aad u badan oo ka tirsanaa saldhigga millatariga ee kooxda Al-shabaab weerarka ku qaadeen.
Wasiir Rachael Omamo ayaa sheegtay in weerarka saldhigga ciidamaddoodu ku lahaayeen Soomaaliya loo adeegsaday qaraxyo is-miidaamin ah oo aad u khatar badnaa.
“Ciidammada Kenya ee ku waxyeelloobay weerarka waxay ka tirsanaayeen kuwa AMISOM ee Soomaaliya,” ayay tidhi Omamo, iyadoo diidday inay faahfaahin ka bixiso in la dilay, in la dhaawacay iyo in la qabsaday.
Saldhigga AMISOM ee Ceel-cadde ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen ciidammo Kenyan ah oo tiradooda lagu sheegay illaa 250 askari, iyagoo Al-shabaab sheegtay inay ku dileen weerarkaas ku dhowaad 100 askari, 12 kalena gacanta ku dhigeen iyagoo nool.
Waxa kaloo Recael Omamo xustay in hawlgalka lagu baadi-goobayo ciidammadooda maqan uu bilowday markii weerarku dhacay kadib, illaa haddana socdo, siina socon doono illaa la badbaadinayo dhammaan ciidammada ka maqan.
Sidoo kale, waxay caddaysay in xaaladda degaanka ciidankooda lagu weeraray tahay mid khatar ah, ciidammada maqanna ku sugan yihiin xaalad halis ah oo aan la qiyaasi karin.
“Qoysaska askarta waxyeelladu soo gaadhay ayaan marka hore u gudbinaynaa warbixin ku aaddan sida khaaaruhu u soo kala gaadhay, markaas kaddib ayaanuna shacabka Kenya u soo gudbin doonnaa warbixin sugan,” ayay hadalkeeda ku dartay Omamo.
Geesta kale, tiro kale oo ciidammada Kenya ee ku dhaawacmay weerarkaas ayaa la geeyey Nairobi gelinkii hore ee shalay, iyadoo weerarkani noqonayo kii ugu xumaa ee ciidanka dalkaas lagula beegsado gudaha waddanka Soomaaliya.